बिजुली र स्वतन्त्र रिपोर्टिंग को निष्कर्ष
नागरिक पत्रकारिता निजी व्यक्ति अनिवार्य रूपले त्यहि कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ जसले व्यावसायिक संवाददाताहरूले कार्य गर्दछ: तिनीहरू जानकारी (अन्यथा प्रयोगकर्ता उत्पन्न गरिएको सामग्रीको रूपमा चिनिन्छ) को रिपोर्ट गर्छन्। त्यो जानकारीले पोडकास्ट सम्पादकीयबाट ब्लगमा शहर काउन्सिल बैठकको बारेमा एक रिपोर्टमा धेरै फारमहरू लिन सक्छ। यसले पाठ, चित्रहरू, अडियो, र भिडीयो समावेश गर्न सक्छ। तर यो मूलतया सबै प्रकारका संचारको बारेमा केही प्रकारको छ।
नागरिक पत्रकारिताको अर्को मुख्य विशेषता हो कि यो सामान्यतया अनलाइन भेटिन्छ। वास्तवमा, ब्लगहरू , पोडकास्टहरू, भिडियो स्ट्रिमिङ र अन्य वेब सम्बन्धी नवाचारहरूसँग इन्टरनेटको उदय - यसले नागरिक पत्रकारितालाई सम्भव बनाएको छ।
इन्टरनेटले गैर-विवेकवादीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्यो। त्यो एक मात्र शक्ति थियो जब एक मात्र सबैभन्दा ठूलो मिडिया निगम र समाचार एजेन्सीहरूको लागि।
नागरिक पत्रकारिता धेरै प्रकारका हुन सक्छ। स्टुडियो आउटको Poynter.org र अरुले धेरै प्रकारको नागरिक नागरिक पत्रकारिताको उल्लेख गरेका छन्। तल नागरिक नागरिक पत्रकारिताको "तहहरू" को एक संक्षेपण संस्करण हो, दुई मुख्य कोटिहरूमा राखिएको छ: अर्ध-स्वतन्त्र र पूर्ण स्वतन्त्र।
अर्ध-स्वतन्त्र नागरिक पत्रकारिता
यसमा अवस्थित व्यावसायिक समाचार साइटहरूमा नागरिकको योगदान, एक रूप वा अन्यमा समावेश छ। उदाहरणका लागि:
पाठकहरूलाई उनीहरूको टिप्पणीमा पेशेवर संवाददाताहरूले लिखित कथाहरूको साथमा पोष्ट गर्दैछन्, मूलतः 21 औं शताब्दीको संस्करण सम्पादकमा। समाचारहरूको बढ्दो संख्याले पाठकहरूले टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न अनुमति दिन्छ। अश्लील वा आपत्तिजनक सन्देशहरू रोक्न प्रयासमा, धेरै वेबसाइटहरू आवश्यक छ कि पाठकहरूको लागि पत्राचारको लागि दर्ता गर्नुहोस्।
प्रोफेसरहरू द्वारा लिखित लेख लेख्नका लागि पाठकहरूलाई उनीहरूको जानकारी थप्दै छन्। उदाहरणको लागि, एक रिपोर्टरले शहर वरिपरी ग्याँस मूल्यमा असमानताको बारेमा लेख लेख्न सक्छ। जब कथा अनलाईन देखा पर्यो, पाठकहरू मूल कहानीमा राखिएका क्षेत्रहरूमा ग्याँस मूल्यहरूको बारेमा जानकारी पोस्ट गर्न सक्छन् र सस्तो ग्याँस किन्न पनि सुझाव दिन्छ।
पाठकहरू एक साथ एकसाथ राखेर व्यावसायिक पत्रकारहरूसँग सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। रिपोर्टरहरूले सोध्न सक्छन् कि पाठकहरू विशेष क्षेत्रका विशेषज्ञतासँग उनीहरूलाई विषयमा सूचना पठाउँछन् वा आफ्नै रिपोर्टिङका ​​केही पनि गर्छन्। त्यस जानकारी त्यसपछि अन्तिम कथामा समावेश गरिएको छ।
पाठक ब्लगहरू पेशेवर समाचार वेबसाइटहरूमा समावेश छन्। यसमा ब्लगहरू समावेश गर्न सक्दछ जुन कुन पाठकहरूले आलोचना गर्दछ कि समाचार संगठन कसरी प्रदर्शन गर्दछ।
स्वतन्त्र नागरिक पत्रकारिता
यसमा नागरिक पत्रकारहरू समावेश छन् जसमा काम गर्ने तरिकाहरूमा पारंपरिक, व्यावसायिक समाचार पत्रहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्। यी ब्लगहरू हुन सक्छन् जसमा व्यक्तिहरूले आफ्नो समुदायमा घटनाहरू रिपोर्ट गर्न सक्छन् वा दिनका समस्याहरूमा टिप्पणी प्रस्ताव गर्न सक्छन्। उदाहरणहरू समावेश छन्:
जीवन गाजा र सिडरोट मा जाना चाहिए
वेबसाइटहरू एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह द्वारा चलाइएको छ जुन स्थानीय समुदायमा समाचार घटनाहरूको बारेमा रिपोर्ट गर्दछ
केहि वेबसाइटहरूमा सम्पादकहरू र स्क्रिन सामग्री छन्; अरूले गर्दैनन्। केहि पनि मुद्रण संस्करणहरू छन्। उदाहरणहरू समावेश छन्:
यस विषयवस्तुमा एक फरक भिन्नता Wikinews हुनेछ, विकिपीडियासँग एक साइट हो, जसमा कसैले कथाहरू पोस्ट गर्न र सम्पादन गर्न सक्दछ
हाइब्रिड साइटहरू जसरी पेशेवर र नागरिक पत्रकारहरू सँगै काम गर्छन्
नागरिक पत्रकारिता अहिले कस्ता छन्?
नागरिक जर्नलिज्म एक पटक एक क्रांतिको रूपमा उत्प्रेरित भएको थियो जुन समाचारमा थप लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो - जुन त्यो मात्र एकमात्र पत्रकार पत्रकारहरूको प्रान्त हुनेछैन। नागरिक पत्रकारहरू स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउँछन् र मुख्यधारा मिडियाको अंतराल भरेर यो प्रगतिमा काम बन्छ। एक समस्या यो हो कि नागरिक पत्रकारिता गैर-चेक-चेक, गलत रिपोर्टिंग द्वारा बेवास्ता गरिएको छ, जस्तै राजनीतिक रिपोर्टहरु जुन आज अमेरिका को आज को विषैले राजनैतिक संस्कृति मा विभाजित गर्दछ। गलत रिपोर्टिङको साथ, श्रोताहरूलाई थाहा छैन वा कसलाई वा के विश्वास गर्न सकिन्छ।
तपाईंको समाचार स्टोरीको लेबरलाई बेवास्ता गर्ने कसरी बचाउन
5 साक्षात्कारको बारेमा राम्रो टिप्पणीहरू कसरी लिने भन्ने बारे सुझावहरू
कुन कुराले कथा सुनाउँछ
लेडिज टू बिट्स: पत्रकारिता सर्तहरू
उत्तरी इलिनोइस विश्वविद्यालय (एनआईयू) प्रवेश
इस्लाममा स्वीकृति गार्डन एन्जिल्स
शीर्ष 10 बच्चाहरु को कुकबुक
केजीबीको संक्षिप्त इतिहास
गन्स एन 'रोजेज जीवनी र प्रोफाईल
'1984' बाट उद्धरणहरू सत्य, राजनीति र विचार पुलिसबारे
आवश्यक ट्री हेरविचार सुझावहरू - तपाईंको ट्री स्वस्थ राख्नुहोस्
नेदरल्याण्ड्स / हल्याण्डको शासकहरू
हनीबेले यौन आत्महत्या गरे
चिनियाँ नयाँ वर्षको दिन मनाउने
इस्लाममा ईद अलतथले कसरी मनाएको छ?
बक्सेडर ट्रीको परिचय
हिप हॉप सबजन्रेटलाई निश्चित मार्गदर्शक
तपाईंको हानिकारक विषाक्त पदार्थहरूको शरीरलाई बुझाउँदै
जब 'स्पेनिश' मा 'U' मा 'E' र 'O' मा 'Y' परिवर्तन गर्नुहोला
#NeverTrump: ट्राभर्सिस्ट विरुद्ध ट्रम्प
सेन्ट के हो?
कसरी चढ्ने काम खोज्नुहोस्
कसरी लास काम गर्दछ
कसरी अर्को पेड मार्फत एउटा ट्री कायम राख्नुहोस्
ला रोचे कॉलेज प्रवेश
मक्का आगन्तुक गाइड
अमेरिकी पशु चिकित्सक स्वास्थ्य हेरविचार लाभ कार्यक्रम आधारभूत